आज काग तिहार , यसकारण गरिन्छ कागको पुजा ! – rastriyakhabar.com
आज काग तिहार , यसकारण गरिन्छ कागको पुजा !
कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिनमा मनाइने काग तिहार पर्व आज(शनिबार) यमराजको दूतका रुपमा कागको पुजा गरेर मनाइँदैछ । दुष्कर्म गर्नेलाई यमराज भएर दण्ड दिने र सत्कर्म गर्नेलाई धर्मराज भएर रक्षा गर्ने विश्वाससहित पनि तिहार पर्व गाँसिएको छ ।
कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीकै दिन शुरु हुने यमपञ्चक भने यस वर्ष तिथिको घटबढका कारण शुक्रबार बेलुकीदेखि नै शुरु भएको छ । शुक्रबार बेलुकी त्रयोदशी तिथि लाग्ने भएकाले यमपञ्चक शुरु गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । बिहान त्रयोदशी भएको दिन काग तिहार मनाउनुपर्ने भएकाले शास्त्रसम्मत् रुपमा शनिबारलाई निर्णय गरिएको समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले बताए ।
कागसँग सम्बन्धित पौराणिक प्रसङ्गहरु :
नेपालमा कागको प्रजाति :
शनिवदेको वाहन भनेर चिनिएका कागलाई घरकाग, कालोकाग (वनकाग), टेमु, टुंगा र राजाकाग भनेर नामकरण गरिएका छन् । तराई र मध्यपहाडसम्म घरकाग (घाँटीमा फुस्रो–फुस्रो हुन्छ) सबैभन्दा बढी पाइन्छन् । घरकागले मानिसको सामिप्यबाट फाइदा लिन्छ । ऊ मानिससँग आश्रित हुन्छ । कसैको करेसाबारीमा निश्चित उचाइको रूख छ भने उसले गुँड लगाइहाल्छ ।
वनकाग पूरै कालो हुन्छ । यसको ठोंड ठूलो र मजबुत हुन्छ । वनकाग दुई प्रजातिका हुन्छन्- ‘पहेंलो ठोंड भएका टेमु र रातो ठोंड भएकालाई टुंगा भनिन्छ । टेमु ३५०० देखि ८२३५ मिटर उचाइसम्ममा भेटिन्छन् । संसारमै सबैभन्दा उचाइमा बाह्रैमास रैथाने भएर बस्ने चरा प्रजाति टेमु हुन् । टुंगाले ३५०० देखि ७२५० मिटरसम्मलाई वासस्थान बनाएका हुन्छन् ।
त्योभन्दा माथि पुगेपछि राजाकाग पाइन्छ । यसको तौल घरकागभन्दा दोब्बर हुन्छ । राजाकागको तौल एक किलोग्रामजति हुन्छ । पाँच प्रजातिका कागको आ–आफ्नै विशेषता छन् । राजाकागबाहेक चार प्रजातिका काग बथानमा बस्छन् । बथानमै रमाउँछन् । तर, राजाकाग बथानमा बस्दैन । राजाकाग दुई वा तीनवटासम्म देख्न सकिने चराविद् डा. हेमसागर बराल बताउँछन् ।
कागतिहारको दिन सामाजिक सञ्जालमा ‘कागजस्तै बाठो हुनू’ भनेर शुभकामना दिनेको कमी छैन । कसैले ‘गीत गाउँदा कागजस्तै मीठो स्वरमा गीत गाउने सबै साथीलाई कागतिहारको शुभकामना’ भनेका छन् । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा ‘काग दाजै काग दाजै पीपल झारिदेऊ, कागिनी भाउजूलाई गुन्युचोलो देऊ’ शीर्षाकृत गीत लेखेर कागलाई सम्झेका छन् ।